यसरी भयो महँगोमा खोप भित्र्याउने धन्दा असफल, अब जनता सामु कुन लाजले उभिन्छन् ? - Himali Patrika
यसरी भयो महँगोमा खोप भित्र्याउने धन्दा असफल, अब जनता सामु कुन लाजले उभिन्छन् ?
हिमाली पत्रिका २४ बैशाख २०७८, 4:17 pm
कुरा राम्रैसँग अगाडि बढ्ला भन्ने भयो। आफ्नी पत्नीको भारत सम्पर्क, आफ्नो नेपालमा प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मकै पहुँच। त्यससँगै भारत र प्रधानमन्त्री दुवैलाई मिलाउँछु भनेर बजेटवाला स्वास्थ्य मन्त्रालय आएका त्रिपाठी।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनाव चिह्नदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मको डिलमा पट्ट्यायाउन सक्ने त्रिपाठी के गरेर बसे? उनी किन हटेनन्, अनि ओलीले उनलाई किन हटाउन सक्दैनन्? जनता कोरोनाको अग्नि कुण्डमा परेको पर्‌यै छन्। ओली त सत्ता टिकाउन लागिपरेका छन्, त्रिपाठी चाहिँ? खोप कमिसनमा ओली समूह र त्रिपाठीबीच द्वन्द्व त प¥यो नै, तर जनता अगाडि उनीहरू कुन लाजले उभिन्छन्?
साभार : आयोमेलडटकम